Product Spotlight: Wohler Technologies- AMP1-8-M Audio Monitor | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ကုန်ပစ္စည်း Spotlight ကို: Wohler Technologies- အဆိုပါ AMP1-8-M ပေး Audio ု့ကပ်ရေး
ကုန်ပစ္စည်း Spotlight ကို: Wohler Technologies- အဆိုပါ AMP1-8-M ပေး Audio ု့ကပ်ရေး
အဆိုပါ Wohler Technologies က AMP1-8-M အသံစောင့်ကြည့်ရေးယူနစ်အတွက်စတူဒီယိုသို့မဟုတ်ဝေးလံသော application များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလျောက်ပတ်သည်။ အဆိုပါယူနစ်ရှစ် SDI အော်ဒီယိုချန်နယ်မှတက်ပေးကဲ့သို့သောကြောက်မက်ဘွယ် features တွေထောက်ပံ့: Adjustments အသံအတိုးအကျယ်နှင့်မှန်သောချိန်ခွင်ထိန်းချုပ်မှု, တောက်ပ 2.4 လက်မအရွယ်အပေါ်အဆင့်ဆင့်နှင့်အဆင့်လက္ခဏာများ၏ရှင်းလင်းသော Display, LED-backlit LCD ကို display တွေ, အသုံးပြုသူ configurations, created ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. ပြန်ပြောပြနိုင်ပါတယ် အဆိုပါထိုးထွင်းသိမြင်ရှေ့ panel က interface ကိုတစျဆငျ့။ အဆုံးအသုံးပြုသူများကို built-in စပီကာ, နားကြပ်သို့မဟုတ် Analog စလက်ငင်းမှတဆင့်စောင့်ကြည့်နှင့်သင့်ထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေဘို့ရှင်းလင်းစွာဖြတ်ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူစေနိုင်သည်။
အဆိုပါ AMP1-8-M အဘို့ရှေးခယျြမှု၏ထုတ်ကုန်ခဲ့သည် NOW က TIMESအိန္ဒိယအတွက်ဦးဆောင် 24 နာရီအင်္ဂလိပ်ဘာသာသတင်းရုပ်သံလိုင်း။ Analog စနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် cable ကို, DTH နှင့်မိုဘိုင်းပေါ်အပါအဝင်အိန္ဒိယအားလုံးကိုပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးမီဒီယာသတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဖြူး။ အဆိုပါ Channel ကိုအိန္ဒိယအပေါ်ပြင်ပတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် www.timesnownews.com.
"ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေသောသွင်းအားစုနှင့်အတူတက်ထားရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအသံစောင့်ကြည့်ရေးယူနစ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်" Kalyan Chakravarthi, အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှူး, Times သတင်းစာက Network ကပြောပါတယ်. "ဒီ AMP1-8-M ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်ကိုဖန်ဆင်းသောအရည်အသွေးကောင်းပီနှင့်အတူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘတ်ဂျက်အတွင်း, အသံ၏ရှစ်လိုင်းများ၏အုပ်စုနှစ်စုစောင့်ကြည့်မယ့် 3G-SDI ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Times သတင်းစာက Network အတိတ်ကာလ Wohler မော်နီတာ [Wohler ရဲ့ AMP2-16V ယူနစ်] ကိုအသုံးပြုထားပြီးကျနော်တို့က၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ဆက်လက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် Wohler ကိုသိနှင့်ကုမ္ပဏီခြွင်းချက်အသံအရည်အသွေးနှင့်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော, ခိုင်မာတဲ့စနစ်ကကမ်းလှမ်းကြောင်းကိုငါသိ၏။ "
အဆိုပါများအတွက် key ကိုအင်္ဂါရပ်တွေကိုအောက်တွင်ရှိပါသည်ပေးအပ် Wohler AMP1-8-M:
SDI ထံမှ 8 က de-embedded အော်ဒီယိုချန်နယ်၏တစ်ပြိုင်နက်အဆင့်ကိုမီတာ
166-segment ကိုပြသမှုနှင့်အတူ high resolution မီတာ
ပြည်တွင်းရေးစပီကာအဘို့အ optional ကိုစကားအနှင့်အတူ built-in စပီကာ, နားကြပ်သို့မဟုတ် Analog စလက်ငင်းမှတဆင့်စောင့်ကြည့်
စတီရီယိုသို့မဟုတ် Mono စောင့်ကြည့်မှု
ချိန်ညှိ Volume ကို AMD Balance
XLR-မစ္စအပေါ်ဟန်ချက်ညီစတီရီယို Analog စလက်ငင်း။ ပုံသေအဆငျ့သို့မဟုတ်အသံအတိုးအကျယ် / ချိန်ခွင်လျှာထိန်းချုပ်ထား။
အလိုအလျောက် frame rate ကို detection နဲ့ရွေးချယ်ရေး
မြင့်မားသောသစ္စာကို Class D ကို amp နှင့်အတူလုံးဝဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ကဗိသုကာ
selection လိုင်းအဆင့်အထိသို့မဟုတ်ရှေ့ panel ကိုအသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်နှင့်အကျိုးရလဒ်များ
OB မော်တော်ယာဉ်များနဲ့ Consoles အတွက်လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်ရေတိမ်ပိုင်းကိုယ်ထည်အတိမ်အနက်
အကြောင်းအရာ Wohler Technologies က Inc က
, လွန်ခဲ့ 30 နှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံး In-ထိန်သိမ်းအသံစောင့်ကြည့်ရေးထုတ်ကုန် Creating Wohler Technologies က signal ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနည်းပညာ၏အရေးပါသောအပိုင်းပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ခေတ်သစ်ပညာရှင်များ၏ဖြစ်ပေါ်နေသောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲကုမ္ပဏီက IP ကိုစွမ်းရည်ကျော်အစွမ်းထက်အော်ဒီယိုနှင့်ဗီဒီယိုအပါအဝင်အဆင့်မြင့်အသံ, ဗီဒီယိုများနှင့်ဒေတာများစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဘို့အမြင့်မားအရည်အသွေး, ဆုရဖြေရှင်းချက်ပေးမယ့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Wohler ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ထိုကဲ့သို့သော Dante, Ravenna / AES67, MPEG2 /4TSoIP, MPEG2 /4TSoASI, UHD / 4K နှင့်အမျှ signal ကိုအမျိုးအစားများတစ် Development အကွာအဝေးများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော signal ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသေချာ SMPTE 2022-6 ။
Hayward, ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးထုတ်လွှင့်, ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများအများအပြား Wohler ရဲ့ဖောက်သည်များအကြားရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.wohler.com.
အပိုဆောင်းသတင်းပစ္စည်းများကိုအဘို့, Wohler ရဲ့လူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များကိုလိုက်နာ:
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-10-31
နောက်တစ်ခု: LynTec LDI 2017 မှာ Lighting ထိန်းချုပ်ရေးအတားအဆီးဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်